रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन एक यस्ता व्यक्ति हुन् जो कसैसँग डराउँदैनन्, यस्तो थियो उनको बाल्यकाल – Etajakhabar
बीबीसी – रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जुडोमा ब्ल्याक बेल्ट हुन् । मार्सल आर्ट खेलको खुबी उनमा धेरै देखिन्छ, त्यो हो छल र आक्रमकता ।
यस्तो छल र आक्रमता युक्रेनमा फौजी हस्तक्षेप गर्ने फैसला, २०१४ मा क्रिमियालाई रुसमा मिलाउने निर्णय र सिरियामा सरकार विरोधी विद्रोहीहरूमाथि बम वर्षाउने काममा प्रयोगक गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
पुटिनका ती फैसलाले कैयौँ पर्यवेक्षकलाई हैरान पारेको थियो । सिरियामा रुसको हस्तक्षेप गर्ने कुराले बसर अल हसदको सरकारलाई सहारा मिल्यो । ६५ वर्षीय पुटिनले रुसको शक्ति देखाउन कहिल्यै कन्जुस्याइँ गरेनन् र यस्तो गर्ने आफ्नो चाहना नै लुकाए ।
वर्षौंसम्म रुसलाई अमेरिका र नेटो देशहरूले नजरअन्दाज गरे तर एक पटक अमेरिकामा पुटिनका पुराना साथी येवगेनी प्रिगोेजहिनमाथि २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो ।
कष्टकर बाल्यकाल भ्लादिमिर पुटिनको बाल्यकाल लेनिनग्राद (अहिलेको सेन्ट पिर्टसबर्ग) मा यस्तो माहोलमा भएको थियो, जहाँ स्थानीय केटाहरूबीच मारकाट साधारण कुरा थियो । यीमध्ये कैयौँ केटा पुटिनभन्दा ठूला र धेरै सङ्ख्यामा हुन्थे । यही कुराले पुटिन जुडो सिक्न थाले । क्रेमलिनको वेबसाइडका अनुसार पुटिन आफ्नो स्कुलको पढाइ पूरा गर्नुभन्दा पहिला नै सोभियत गुप्तचर सेवामा समावेश हुन चाहन्थे ।
अक्टुबर २०१५ मा पुटिनले भनेका थिए, ५० वर्ष पहिला लेनिनग्रादका सडकहरूले मलाई एक नियम सिकाएका थिए । यदि लडाइँ हुने निश्चित छ भने पहिलो मुक्का प्रहार गर । त्यसको अर्थ के थियो भने रुसमा चरमपन्थीको हमला पर्खनुभन्दा राम्रो सिरियामा उनीसँग लड्नुपर्छ । पुटिन सडकमा लडाइँ गर्ने आवाराहरूले प्रयोग गर्ने शब्द बोलेको पनि सुनियो ।
चेचेन्यामा अलगाउवादी विद्रोहीविरुद्ध रुसी सेनाको कारवाहीको समर्थन गर्दै पुटिनले उनलाई ट्वाइलेटसम्म सफा गराउने कसम खाएका थिए ।
मुस्लिम बाहुल्य नर्थ ककेससको इलाकामा १९९९–२००० को समयमा ठूलो लडाइँले ध्वस्त भएको थियो । यसमा हजाराँै मानिस मारिएका थिए ।
पुटिनले जर्जियामा एक अर्को मोर्चा खोले । सन् २००८ मा रुसी सेनाले जर्जियाई सेनालाई लखेटे र अबकाजिया र साउथ असेटियामाथि कब्जा गरे ।
त्यो समयमा जर्जियाका तत्कालीन नेटा समर्थक राष्ट्रपति मिखाइल साकासविलीसँग पुटिनको कटुता बढेको थियो । यसबाट सोभियत सङ्घका पहिलेका घटक देशहरूमा पश्चिमी समर्थक नेताहरूसँग बदला लिन पुटिन तयार छन् भन्ने लागेको थियो । श्रोत – रातो पाटि
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०७, २०७४ समय: २१:२८:०९
मेलिना राइ संग यसरि कम्पिडीसनमा गीत गाए अशोक दर्जीले, मख्खै परे अशोक दर्जी मेलिना राइ संग गीत गाउन पाउदा (भिडियो)
बलिउड अभिनेता संजय दत्तको जीवनीमा आधारित वायोपिक फिल्म ‘सन्जु’को टिजर सार्वजनिक
प्रहरीले खोजिरहेका ‘गोल्ड डन’ भनिने गोरे को हुन्? यिनले गरेको काण्ड यस्तो डरलाग्दो थियो
श्रीमतीको निधनपछि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज एच डब्लु बुस विरामी, अमेरिकाका पुर्व रास्ट्रपति छोरा जर्ज डब्लु बुसले बाबुलाई व्हिलचियरमा हस्पिटल लाँदै
पोर्चुगलमा बसेर पोर्न स्टार बनाईदिन्छु भन्दै एक परिवारको उठिवास ! औषधि खुवाएर होटलमा यौन सम्पर्क गरेको भिडियो खिचेर थालियो यसरि ब्लाकमेल गर्न (भिडियोसहित)